Na a bit nke savvy ụzọ na a na-agbanwe oge, ị pụrụ nnọọ mfe Ibe ọnụ ihe njegasi ga-eme ka njem dị nnọọ ka nnukwu dị ka ebe.
Lake Garda bụ otu n'ime ndị kasị ibu Lakes na Northern Italy na kasị na ice ọdọ Italy ise ọdọ mmiri, nri site na Alps na n'ebe ugwu. North of Verona, Lake Garda bụ ihe kasị ezinụlọ – na mmiri sports-edebere nke Italy ọdọ mmiri. Ọ bụkwa ọdọ mmiri kasị ukwuu n’ Italytali, eru si nkpoda Alpine foothills ka ugwu ihu Po Valley.
Ozi ka mma ọbụna. Lake Garda ọnọdụ na-enye ya a isua gburugburu ọnọdụ ihu igwe ebe mkpụrụ oliv na lemons na-eto eto nke ọma n'ebe ugwu nke ha na mbụ nso. Zuru okè n'ihi na n'ehihie ụfọdụ G&T! Tinye ogologo aja osimiri na a ipigide obodo na Lakeside promenades echiche. I wee onwe gị zuru okè ezumike ebe!